Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Carewell SEIU 503
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Meey 22, 2020
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa siyaasadahayaga iyo nidaamkayaga ururinta, isticmaalka iyo bixinta macluumaadkaaga Markaad Adeegga adeegsanayso oo ay kuu sheegayso xuquuqdaada gaarka ah iyo sida sharcigu kuu ilaalinayo.
Waxaan u adeegsaneynaa macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed inaan ku bixinno oo aan ku horumarinno Adeegga. Adoo adeegsanaya Adeegga, Waxaad ku raacsan tahay ururinta iyo isticmaalka macluumaadka si waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Tafsiir iyo Qeexid
Erayada xarafka ugu horeeya xarfo looga leeyahay waxay leeyihiin macnayaal lagu qeexay xaaladaha soo socda.
Qeexitaannada soo socdaa waa inay yeeshaan macno isku mid ah iyadoon loo eegin inay u muuqdaan kelinimo ama jamac.
Ujeeddooyinka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah:
Adiga waxaa loola jeedaa shakhsiga galaya ama isticmaalaya Adeegga, ama shirkadda, ama hay’ad kale oo sharci ah oo wakiil ka ah qofka noocan ahi uu helayo ama u adeegsanayo Adeegga, sida ay khuseyso.
Marka loo eego GDPR (Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta), Waxaa laguu gudbin karaa inaad tahay Mawduuca Xogta ama Isticmaalaha maadaama aad tahay shakhsiga adeegsanaya Adeegga.
Shirkadda (oo loo yaqaan midkoodna “Shirkadda”, “Anaga”, “Annaga” ama “Kuweenna” ee Heshiiskan) waxaa loola jeedaa Iskaashiga RISE, 525 NE Oregon St. Portland, AMA 97232.
Ujeedada GDPR, Shirkaddu waa Maamulaha Macluumaadka.
Gacansaar macnaheedu waa hay’ad maamusha, ay maamusho ama ay si guud ula socoto dhinac, halkaas oo “kontarool” macnaheedu yahay lahaanshaha 50% ama ka badan saamiyada, danaha sinnaanta ama dammaanadaha kale ee xaq u leh inay u codeeyaan doorashada agaasimayaasha ama maamulka kale ee maamulka.
Xisaab macnaheedu waa koonto gaar ah oo adiga laguu abuuray si aad u hesho Adeeggeenna ama qaybo ka mid ah Adeeggeenna.
Degel waxaa loola jeedaa Carewell SEIU 503, oo laga heli karo carewellseiu503.org
Adeeg waxaa loola jeedaa Website-ka.
Dalka waxaa loola jeedaa: Oregon, Mareykanka
Adeeg bixiye waxaa loola jeedaa qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah oo ku shaqeynaya xogta isagoo matalaya Shirkadda. Waxay loola jeedaa shirkadaha saddexaad ama shakhsiyaadka ay shirkaddu u shaqeyso si ay u fududeeyaan Adeegga, inay u bixiyaan Adeegga iyaga oo ka wakiil ah Shirkadda, inay qabtaan adeegyo la xiriira Adeegga ama inay ka caawiyaan Shirkadda falanqaynta sida Adeegga loo adeegsado.
Ujeedada GDPR, Bixiyeyaasha Adeegga waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin processor-yada xogta.
Qeybta saddexaad ee Adeegga Warbaahinta Bulshada waxaa loola jeedaa degel kasta ama degel kasta oo shabakad bulsheed ah oo Isticmaalaha uu ka soo gali karo ama ka sameysan karo koonto adeegsiga.
Bogga Fan Facebook waa astaan guud oo loogu magac daray Carewell SEIU 503 oo si gaar ah shirkadda ay ugu sameysay shabakadda xiriirka bulshada ee Facebook, lagana heli karo https://www.facebook.com/CarewellSEIU503
Xogta Shakhsiyeed waa macluumaad kasta oo la xiriira shaqsi la aqoonsaday ama la aqoonsan karo.
Ujeeddooyinka GDPR, Xogta Shakhsiyeed macnaheedu waa wixii macluumaad ah ee adiga kugu saabsan sida magac, lambarka aqoonsiga, xogta goobta, aqoonsiga khadka tooska ah ama mid ama in ka badan oo arrimo gaar u ah jirka, jir ahaaneed, hidde ahaan, maskax ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan ama bulsho ahaan aqoonsiga.
Ujeeddooyinka CCPA, Xogta Shakhsiyeed waxaa loola jeedaa macluumaad kasta oo tilmaamaya, la xiriira, sharraxa ama karti u leh inuu la xiriiro, ama macquul ahaan ugu xirmi karo Adiga.
Kukiyada waa faylal yar yar oo la dhigo kombuyuutarkaaga, aaladdaada moobaylka ama aalad kale oo websaydh ah, oo ay ku jiraan faahfaahinta taariikhda daalacashadaada ee boggaas oo ka mid ah adeegsigeeda badan.
Qalab waxaa loola jeedaa qalab kasta oo geli kara Adeegga sida kombuyuutar, taleefanka gacanta ama kiniin dijitaal ah.
Xogta Isticmaalka waxaa loola jeedaa xogta si otomaatig ah loo soo ururiyey, ama ay soo saartay isticmaalka Adeegga ama kaabayaasha Adeegga lafteeda (tusaale ahaan, muddada booqashada bogga).
Maamulaha Xogta , ujeeddooyinka GDPR (Xeerka Ilaalinta Xogta Guud), waxaa loola jeedaa Shirkadda inay tahay qof sharci ah oo keligiis ama si wadajir ah ula leh dadka kale go’aaminaya ujeedooyinka iyo hababka loo adeegsanayo Xogta Shakhsiyeed.
Ha Raadsan (DNT) waa fikrad ay dhiirrigeliyeen hay’adaha xakamaynta Mareykanka, gaar ahaan Guddiga Ganacsiga Federaalka ee Mareykanka (FTC), in warshadaha internetka ay horumariyaan oo ay hirgeliyaan qaab u oggolaanaya dadka isticmaala internetka inay xakameeyaan la socoshada howlahooda internetka ee guud ahaan bogagga internetka. .
Ganacsi, Ujeedada CCPA (Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya), waxaa loola jeedaa Shirkadda inay tahay hay’ad sharciyeed aruurisa macluumaadka shaqsi ee Macaamiisha isla markaana go’aamisa ujeeddooyinka iyo hababka loo marayo ka shaqeynta macluumaadka shaqsiyeed ee Macaamiisha, ama magaca macluumadkaas. la ururiyey oo keligiis, ama si wadajir ah kuwa kale, ayaa go’aaminaya ujeeddooyinka iyo macnaha loo maro ka shaqeynta macluumaadka shakhsiyeed ee macaamiisha, ee ka ganacsada Gobolka Kalifoorniya.
Macaamiil , Ujeedada CCPA (Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya), waxaa loola jeedaa qof dabiici ah oo deggan California. Degane, sida lagu qeexay sharciga, waxaa ka mid ah (1) shaqsi kasta oo ku sugan USA wax aan ka aheyn ku meelgaar ama ujeedo ku meel gaar ah, iyo (2) shaqsi kasta oo guri ku leh Mareykanka oo ka baxsan Mareykanka si ku meelgaar ah ama ujeedka ku meel gaarka ah
Iib , Ujeedada CCPA (Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya), waxaa loola jeedaa iibinta, kireysiga, sii deynta, siideynta, faafinta, diyaarinta, wareejinta, ama haddii kale ku wada xiriiridda hadal ahaan, qoraal ahaan, ama elektiroonig ama qaabab kale, Macluumaadka Shakhsiyeed ee Macaamilka ganacsi kale ama dhinac saddexaad si loo helo lacag ama tixgelin kale oo qiimo leh.
Ururinta iyo Adeegsiga Xogtaada Shakhsiyeed
Noocyada Xogta La Uruuriyay
Intaad adeegsaneysid adeegeena, waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano inaad na siiso macluumaad shaqsiyeed la aqoonsan karo oo loo isticmaali karo in lagula xiriiro ama lagugu aqoonsado. Macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn:
Magaca hore iyo magaca dambe
Cinwaanka, Gobolka, Gobolka, ZIP / Lambarka boostada, Magaalada
Xogta Isticmaalka waxaa si otomaatig ah loo ururiyaa marka la adeegsanayo Adeegga.
Xogta Isticmaalka waxaa ku jiri kara macluumaad sida cinwaanka borotokoolka Internetka ee Qalabkaaga (tusaale cinwaanka IP), nooca biraawsarka, nooca biraawsarka, bogagga Adeegga aad booqatay, waqtiga iyo taariikhda booqashadaada, waqtiga lagu qaatay bogaggaas, qalab gaar ah aqoonsi iyo macluumaad kale oo lagu ogaanayo cudurka.
Markaad Adeegga ku gasho ama aad marto mobilka, Waxaan u aruurin karnaa macluumaadka qaarkood si otomatig ah, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, nooca qalabka mobilada aad isticmaasho, Qalabkaaga mobilada Aqoonsiga u gaarka ah, cinwaanka IP ee qalabkaaga mobilada, Moobilkaaga nidaamka qalliinka, nooca biraawsarka internetka ee mobilada ah ee aad isticmaasho, aqoonsiyo qalab oo u gaar ah iyo xogta kale ee lagu ogaado cudurka
Waxaan sidoo kale aruurin karnaa macluumaadka uu biraawsarkaagu soo diro mar kasta oo aad soo booqato Adeeggayaga ama markaad Adeegga ka gasho ama aad marto taleefanka gacanta.
Macluumaad laga helo Adeegyada Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad
Shirkaddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameysato koonto oo aad gasho si aad ugu isticmaasho Adeegga adoo adeegsanaya Adeegyada Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad ee soo socda:
Haddii aad go’aansato inaad iska diiwaangeliso ama haddii kale aad noo oggolaato helitaanka Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad, Waxaan soo ururin karnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee horeyba ula xiriiray koontadaada Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad, sida magacaaga, Cinwaanka emailkaaga, Hawlahaaga ama Liiskaaga xiriirka ee la xiriira koontadaas.
Waxaad sidoo kale heli kartaa ikhtiyaarka ah inaad macluumaad dheeri ah la wadaagto Shirkadda adoo adeegsanaya koontadaada Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad. Haddii aad doorato inaad bixiso macluumaadka noocaas ah iyo Xogta Shakhsiyeed, inta lagu jiro diiwaangelinta ama haddii kale, Waxaad siinaysaa Shirkadda oggolaansho inay adeegsato, wadaagto, oo ku kaydiso qaab waafaqsan Nidaamkan Asturnaanta.
Raadinta Teknolojiyada iyo Kukiyada
Waxaan u adeegsanaa Kukiyada iyo tikniyoolajiyada la midka ah ee la-socodka si aan ula socono waxqabadka Adeeggeena oo aan u kaydinno macluumaadka qaarkood. Tiknoolajiyada la socoshada ee la adeegsaday waa shumacyo, astaamo, iyo qoraallo si loo soo ururiyo loona la socdo macluumaadka loona hagaajiyo loona falanqeeyo Adeeggeena.
Waxaad ku amri kartaa biraawsarkaaga inuu diido dhammaan Kukiyada ama tilmaamo goorta la soo dirayo cookie. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aqbalin Kukiyada, Ma awoodi kartid inaad isticmaasho qaybo ka mid ah Adeegyadeena.
Kukiyada waxay noqon karaan “Ku adkaysi” ama “Fadhi” Kukiyada. Kukiyada Joogtada ah waxay ku sii jiraan kombuyuutarkaaga gaarka ah ama aaladda mobiilka markaad Khadka ka baxdo, halka Kukiyada Fadhiga la tirtiro isla marka aad xirto biraawsarkaaga. Wax badan ka baro cookies-ka ku jira “Waa maxay Kukiyada” maqaalka.
Waxaan u isticmaalnaa labada kalfadhi iyo Kukiyada joogtada ah ujeeddooyinka hoos ku xusan:
Kukiyada loo baahan yahay / Aasaasiga ah
Nooca: Kukiyada Fadhiga
Waxaa maamula: Us
Ujeeddo: Kukiyadaani waa lagama maarmaan inay ku siiyaan adeegyo laga heli karo Websaydhka iyo inay kuu suurta geliso inaad adeegsato qaar ka mid ah astaamaheeda. Waxay ka caawiyaan xaqiijinta isticmaaleyaasha iyo ka hortagga isticmaalka khiyaanada ah ee xisaabaadka isticmaalaha. Haddii aan la helin Kukiyadaas, adeegyadii aad codsatay lama bixin karo, Kaliya waxaan u adeegsanaa Kukiyadaas inaan ku siino adeegyadaas.
Kukiyada Aqbalaada Ogolaanshaha Kukiyada
Nooca: Kukiyada joogtada ah
Ujeeddo: Kukiyadaani waxay aqoonsadaan haddii isticmaalayaashu ay aqbaleen isticmaalka cookies-ka websaydhka.
Ujeeddo: Kukiyadaani waxay noo oggolaanayaan inaan xusuusano xulashooyinka aad sameysid markii aad isticmaaleyso Websaydhka, sida xusuusinta faahfaahinta soo galitaankaaga ama doorbididda luqadda. Ujeedada Kukiyadaani waa inay ku siiso khibrad shaqsiyeed oo dheeraad ah iyo inay kaa fogaato inaad dib u gasho dookhaaga mar kasta oo aad Isticmaasho Websaydhka.
Raadinta iyo Kukiyada Waxqabadka
Waxaa Maamula: Xisbiyada Saddexaad
Ujeeddo: Kukiyadahan waxaa loo isticmaalaa in lagu dabagalo macluumaadka ku saabsan taraafikada Websaydhka iyo sida isticmaaleyaashu u adeegsadaan Websaydhka. Macluumaadka lagu soo ururiyey Kukiyadaas waxay si toos ah ama si dadbanba kuu aqoonsan karaan inaad tahay qof booqde ah. Tani waa sababta oo ah macluumaadka la ururiyey waxay caadi ahaan ku xiran yihiin aqoonsi been abuur ah oo la xiriira aaladda aad u isticmaasho marinka Websaydhka. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa Kukiyadaan si aan u tijaabino xayeysiisyada cusub, bogagga, muuqaalada ama shaqeynta cusub ee Websaydhka si aan u aragno sida adeegsadayaashu ula falgalaan iyaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kukiyada aan isticmaalno iyo xulashooyinkaaga ku saabsan cookies, fadlan booqo Nidaamkayaga Kukiyada.
Adeegsiga Xogtaada Shakhsiyeed
Shirkadu waxay u isticmaali kartaa Xogta Shakhsiyadeed ujeedooyinka soo socda:
Si loo bixiyo loona ilaaliyo Adeeggeena , oo ay ku jiraan in lala socdo adeegsiga Adeeggeena.
Si loo maareeyo Koontadaada: si aad u maamusho Diiwaangelintaada isticmaale ahaan Adeegga. Xogta Shakhsi ahaaneed ee aad bixiso waxay ku siin kartaa inaad hesho adeegyo kala duwan oo Adeeg ah oo aad adigu heli karto adoo adeegsanaya diiwaangashan.
Waxqabadka qandaraaska: horumarinta, u hoggaansamida iyo qaadashada qandaraaska iibka ee alaabooyinka, walxaha ama adeegyada aad soo iibsatay ama qandaraas kasta oo kale oo aad nala gasho adoo adeegsanaya Adeegga.
Si aan kula soo xiriiro: Si aad kula soo xiriirto emayl, wicitaano taleefan, SMS, ama qaabab kale oo u dhigma oo xiriir elektiroonig ah, sida ogeysiiska riixista ee mobilka ee ku saabsan cusbooneysiinta ama isgaarsiinta macluumaadka ee la xiriira howlaha, alaabada ama adeegyada qandaraaska leh, oo ay ku jiraan cusbooneysiinta amniga, markii loo baahdo ama macquul fulintooda.
Inaan ku siiyo oo leh warar, dalabyo gaar ah iyo macluumaad guud oo ku saabsan badeecadaha kale, adeegyada iyo dhacdooyinka aan bixinno oo la mid ah kuwii aad horay u iibsatay ama aad wax ka weydiisay mooyee Haddii aad dooratay inaadan helin macluumaadkaas oo kale.
Si loo maareeyo codsiyadaada: Inaad kaqeyb gasho oo aad maamusho codsiyadaada Noo.
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed xaaladaha soo socda:
Adeeg bixiyaasha: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed Bixiyeyaasha Adeegga si aan ula soconno una falanqeyno adeegsiga Adeeggeenna, si aan kula soo xiriirno.
Wareejinta Ganacsiga: Waxaan la wadaagi karnaa ama u wareejin karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee la xiriira, ama inta lagu jiro wada-xaajoodka, midoobo kasta, iibinta hantida Shirkadda, maalgelinta, ama helitaanka dhammaan ama qayb ka mid ah ganacsigeenna shirkad kale.
La-hawlgalayaal: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga la-hawlgalayaashayada, xaaladdan oo kale waxaan uga baahan doonnaa kuwa ku-xiran inay ixtiraamaan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Shirkadaha gacansaarka la leh waxaa ka mid ah shirkaddayada waalidka ah iyo kuwa kale ee la shaqeeya, shuraako wada-hawlgalayaal ah ama shirkado kale oo aan gacanta ku hayno ama aan annaga guud ahaan gacanta ku hayno.
La-hawlgalayaasha Ganacsi: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga wada-hawlgalayaashayada ganacsiga si aan kuugu soo bandhigno alaabooyin, adeegyo ama dallacsiinno gaar ah.
Isticmaalayaasha kale: Markaad la wadaagto macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama haddii kale aad la fal-gasho aagagga dadweynaha ee isticmaalayaasha kale, macluumaadka noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay daawadaan dhammaan adeegsadayaasha oo si guud loogu qaybiyo banaanka. Haddii aad la macaamisho isticmaaleyaasha kale ama aad iska diiwaangeliso Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad, Xiriirradaada ku jira Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Saddexaad waxay arki karaan Magacaaga, astaantaada, sawirradaada iyo sharaxaada Waxqabadkaaga. Sidoo kale, isticmaaleyaasha kale waxay awoodi doonaan inay eegaan sharraxaadda waxqabadkaaga, kula soo xiriiraan oo ay eegaan astaantaada.
Haysashada Xogtaada Shakhsiyeed
Shirkaddu waxay hayn doontaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed illaa iyo inta ay lagama maarmaanka u tahay ujeedooyinka lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waan hayn doonnaa oo adeegsan doonnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed illaa inta lagama maarmaanka u ah u hoggaansamida waajibaadkayaga sharci (tusaale ahaan, haddii nalooga baahan yahay inaan xafidno xogtaada si aan ugu hoggaansano sharciyada khuseeya), xallino khilaafaadka, iyo inaan dhaqan galino heshiisyadayada iyo siyaasadahayaga sharci.
Shirkaddu sidoo kale waxay hayn doontaa Macluumaadka Isticmaalka ujeeddooyin falanqayn gudaha ah. Xogta Isticmaalka guud ahaan waa la hayaa muddo gaaban, marka laga reebo marka xogtan loo adeegsado in lagu xoojiyo amniga ama lagu hagaajiyo howlaha Adeeggeena, ama Sharci ahaan ayaa waajib nagu ah inaan sii hayno xogtan muddo dheer.
Wareejinta Xogtaada Shakhsiyeed
Macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan Xogta Shakhsi ahaaneed, waxaa lagu farsameeyaa xafiisyada shirkadda ee ka hawlgala iyo meelaha kale ee ay ku sugan yihiin dhinacyada hawsha wada. Waxay ka dhigan tahay in macluumaadkan loo wareejin karo – laguna hayn karo – kombuyuutarro ku yaal meel ka baxsan gobolkaaga, gobolkaaga, waddankaaga ama awood kale oo dawladeed halkaas oo sharciyada ilaalinta xogta ay ku kala duwanaan karaan kuwa ka imanaya xukunkaaga.
Oggolaanshahaaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo ay ku xigto Soo gudbintaada macluumaadka noocan ahi waxay ka dhigan tahay heshiiskaaga wareejintaas.
Shirkadda waxay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka sida macquulka ah lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in macluumaadkaaga loola dhaqmo si ammaan ah oo waafaqsan siyaasaddan asturnaanta mana wareejin karto Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed meelna ugama dhici doonto urur ama waddan haddii aysan jirin kontaroolo ku filan oo ay ku jiraan amniga Xogtaada iyo macluumaadkaaga kale ee shaqsiyeed.
Bixinta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Haddii Shirkaddu ku lug leedahay midow, helitaan ama iibinta hantida, Macluumaadkaaga Shakhsiyeed waa la wareejin karaa. Waxaan bixin doonaa ogeysiis kahor intaan macluumaadkaaga shaqsiyadeed la wareejin oo ay ku xirnaato siyaasad gaar ah oo gaar ah.
Xaaladaha qaarkood awgood, Shirkadda waxaa looga baahan karaa inay shaaciso Macluumaadkaaga Shakhsiyeed haddii looga baahan yahay inay sidaa ku sameyso sharci ama iyadoo ka jawaabeysa codsiyada ansaxa ah ee maamulka dadweynaha (tusaale ahaan maxkamad ama hay’ad dawladeed).
Shuruudaha kale ee sharciga ah
Shirkaddu waxay ku soo bandhigi kartaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed iyadoo la aamminsan yahay in tallaabadaas ay lagama maarmaan u tahay:
U hogaansanaanta waajibka sharciga ah
Ilaalinta iyo difaaca xuquuqda ama hantida Shirkadda
Kahortaga ama baaritaanka khaladaadka suurtagalka ah ee la xiriira Adeegga
Ilaali badbaadada shaqsiyeed ee Isticmaalayaasha Adeegga ama dadweynaha
Ka ilaali mas’uuliyadda sharciga
Amniga Xogtaada Shakhsiyeed
Amniga Xogtaada Shakhsi ahaaneed waa mid muhiim noo ah, laakiin xusuusnow inaysan jirin hab lagu faafiyo internetka, ama qaab kaydinta elektaroonig ah oo 100% aamin ah. In kasta oo aan ku dadaalno inaan adeegsanno qaab ganacsi oo la aqbali karo oo lagu ilaaliyo Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, Dammaanad kama qaadi karno nabadgelyadiisa buuxda.
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan Habraaca Macluumaadkaaga Shaqsiyeed
Adeeg Bixiyeyaashu waxay marin u heli karaan Xogtaada Shakhsi ahaaneed oo keliya si ay ugu gutaan howlahooda Anaga oo ku mas’uul ah waana waajib in aysan bixin ama u adeegsan ujeedo kale.
Waxaan u adeegsan karnaa bixiyeyaasha Adeegga-saddexaad si aan ula socono oo aan u lafaguro adeegsiga Adeeggeenna.
Waxaan u isticmaali karnaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed inaan kula soo xiriirno joornaalada, suuq-geynta ama agabyada xayeysiinta ah iyo macluumaadka kale ee adiga xiisaha kuu leh. Waad ka bixi kartaa inaad ka hesho wax uun, ama dhammaan, isgaarsiintaan annaga Adoo raacaya iskuxirka ka saarista ama tilmaamaha lagu bixiyay emayl kasta oo aan dirno ama nala soo xiriir.
Waxaan u isticmaali karnaa Adeeg Bixiyeyaasha Suuqgeynta Emailka si aan u maamulno oo aan kuugu soo dirno emayllo Adiga.
Aasaaska Sharciga ee Ku Shaqeynta Xogta Shakhsiyeed ee hoos timaada GDPR
Waxaan ku shaqeyn karnaa Xogta Shakhsiyeed shuruudaha soo socda:
Oggolaansho: Waxaad siisay ogolaanshahaaga ka shaqeynta Xogta Shakhsiyeed hal ama in ka badan ujeedooyin gaar ah.
Waxqabadka qandaraaska: Bixinta Xogta Shakhsiyeed waxay lagama maarmaan u tahay waxqabadka heshiiska adiga iyo / ama wixii waajibaadka qandaraaska kahor ah.
Waajibaadka sharciga: Ka shaqeynta Xogta Shakhsi ahaaneed waxay lagama maarmaan u tahay u hoggaansamida waajibaadka sharciga ah ee ay Shirkadda ku xiran tahay.
Danaha muhiimka ah: Ka shaqeynta Xogta Shakhsiyeed waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo Danahaaga muhiimka ah ama qof kale oo dabiici ah.
Danta guud: Ka shaqeynta Xogta Shakhsiyeed waxay la xiriirtaa hawl lagu fulinayo danta guud ama ku shaqeynta awood rasmi ah oo ay leedahay Shirkadda.
Danaha sharciga ah: Ka shaqeynta Xogta Shakhsiyeed waxay lagama maarmaan u tahay ujeedooyinka danaha sharciga ah ee ay baacsaneyso Shirkadda.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Shirkaddu waxay si farxad leh uga caawin doontaa inay caddeyso aasaaska sharci ee gaarka ah ee khuseeya ka shaqeynta, iyo gaar ahaan haddii bixinta Xogta Shakhsiyeed ay tahay mid sharci ama heshiis looga baahan yahay, ama shuruud lagama maarmaan u ah in la galo qandaraas.
Shirkaddu waxay ballanqaadeysaa inay ixtiraamto sirta Xogtaada Shakhsiyeed iyo inay dammaanad qaado Waxaad ku dhaqmi kartaa xuquuqdaada.
Xaq ayaad u leedahay qaanuunkaan gaarka ah, iyo sharci ahaan haddii aad ka tirsan tahay Midowga Yurub, inaad:
Codso helitaanka macluumaadkaaga shaqsiyeed. Xaq u leeyahay helitaanka, cusbooneysiinta ama tirtirida macluumaadka aan adiga kugu hayno. Markasta oo ay suurtogal noqoto, waad marin ka heli kartaa, cusbooneysiin kartaa ama codsan kartaa in la tirtiro Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed si toos ah qaybta dejinta koontadaada. Haddii aadan awoodin inaad sameyso ficilladan naftaada, fadlan nala soo xiriir si aan kuu caawinno. Tani waxay sidoo kale awood kuu siineysaa inaad hesho nuqul ka mid ah Xogta Shakhsiyeed ee aan kaa hayno.
Codso sixitaanka Xogta Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan. Waxaad xaq u leedahay inaad heshid macluumaad aan dhammeystirneyn ama aan sax ahayn oo aan kaa heyno adiga oo saxan.
Ujeedo ka shaqeynta Xogtaada Shakhsiyeed. Xaqan ayaa jira halka aan ku tiirsaneyno dano sharci ah oo aasaas sharci u ah howsheena waxaana jira wax ku saabsan xaaladaada gaarka ah, taas oo kaa dhigeysa inaad rabto inaad kahortagto howshayada macluumaadkaaga shaqsiyeed ee dhulkaan. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad diido halka aan uga shaqeyneyno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ujeedooyin suuqgeyn toos ah.
Codsi masixi Xogtaada Shakhsiyeed. Waxaad xaq u leedahay inaad na weydiiso inaan tirtirno ama ka saarno Xogta Shakhsiyeed marka aysan jirin sabab wanaagsan oo aan ugu sii wadno howsheeda.
Codso wareejinta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Waxaan ku siin doonaa adiga, ama dhinac saddexaad oo aad dooratay, Macluumaadkaaga Shakhsiyeed qaab qaabaysan, caadi ahaan loo isticmaalo, qaab mashiin-akhrin kara. Fadlan la soco in xuquuqdani ay khuseyso oo keliya macluumaadka otomaatiga ah ee aad markii hore aad siisay ogolaanshaha annaga si aan u isticmaalno ama meeshii aan ugu isticmaalnay macluumaadka si aan heshiis kula galno
Ka noqo ogolaanshahaaga. Waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaaga adoo adeegsanaya Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Haddii Aad Ka Noqoto Ogolaanshahaaga, Waxaa suura gal ah inaanan ku siinin inaad marin u yeelato howlaha gaarka ah ee Adeegga.
Ku-jimicsiga Xuquuqdaada Ilaalinta Xogta ee GDPR
Waad ku dhaqmi kartaa xuquuqdaada helitaanka, sixitaanka, joojinta iyo diidmada adoo nala soo xiriiraya. Fadlan la soco inaan ku weydiin karno inaad xaqiijiso aqoonsigaaga ka hor intaadan ka jawaabin codsiyada noocaas ah. Haddii aad codsi samayso, Waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican ee aan ugu jawaabno sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaad xaq u leedahay inaad uga dacwooto Hay’adda Ilaalinta Xogta aruurinta iyo isticmaalka Xogtaada Shakhsiyeed. Wixii macluumaad dheeraad ah, haddii aad ku sugan tahay Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA), fadlan la xiriir hay’adda ilaalinta xogta deegaankaaga ee EEA.
Bogga Fan Facebook
Maamulaha Xogta ee Facebook Fan Page
Shirkaddu waa Maamulaha Macluumaadka Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee la ururiyey iyadoo la adeegsanayo Adeegga. Adiga oo ah hawl wade ka tirsan Facebook Fan Page ( https://www.facebook.com/CarewellSEIU503 ), Shirkadda iyo hawl wadeenka shabakadda bulshada ee Facebook waa Wadajirka Wadajirka.
Shirkaddu waxay heshiisyo la gashay Facebook oo qeexaya shuruudaha isticmaalka Facebook Fan Page, iyo waxyaabo kale. Shuruudahaani badanaa waxay ku saleysan yihiin Shuruudaha Adeegga ee Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Booqo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Facebook https://www.facebook.com/policy.php wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida Facebook u maamulo xogta shakhsiga ah ama kala xiriir Facebook khadka tooska ah, ama boosto ahaan: Facebook, Inc. ATTN, Hawlgallada Asturnaanta, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Mareykanka.
Waxaan u adeegsanaa shaqada Facebook Insights ee la xiriirta hawlgalka Facebook Fan Page iyo saldhigga GDPR, si aan u helno xogta tirakoobka ee ku saabsan isticmaaleyaasheena.
Ujeedadaas awgeed, Facebook ayaa buskud ku ridaya qalabka isticmaalaha booqanaya Boggeena Taageerayaasha Facebook. Kukii kasta wuxuu ka kooban yahay lambar aqoonsi oo u gaar ah wuxuuna sii shaqeynayaa muddo labo sano ah, marka laga reebo marka la tirtiro kahor dhammaadka muddadan.
Facebook wuxuu helaa, diiwaan galiyaa isla markaana ka baaraandegaa macluumaadka ku kaydsan cookie-ka, gaar ahaan marka uu adeegsadaha booqdo adeegyada Facebook, adeegyada ay bixiyaan xubnaha kale ee Facebook Fan Page iyo adeegyada shirkadaha kale ee adeegsada adeegyada Facebook.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan dhaqannada gaarka ah ee Facebook, fadlan booqo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Facebook halkan: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Xuquuqdaada ee hoos timaada CCPA
Marka loo eego Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, iyo sharci ahaan haddii aad degan tahay California, Waxaad leedahay xuquuqaha soo socda:
Xaq u leeyahay ogeysiis Waa in si sax ah lagugu ogeysiiyo qaybaha macluumaadka shakhsiga ah ee la aruurinayo iyo ujeedooyinka loo adeegsanayo Xogta Shakhsiyeed.
Xaq u leeyahay helitaanka / xaqa codsi. CCPA waxay kuu ogolaaneysaa inaad codsato oo aad ka hesho macluumaadka Shirkadda ee la xiriira bixinta macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la soo aruuriyay 12-kii bilood ee la soo dhaafay ee Shirkadda ama ku-xigeennadeeda oo loo diray dhinac saddexaad ujeeddooyinka suuq-geynta tooska ah ee kooxda saddexaad.
Xaq u leeyahay in la yiraahdo maya iibinta Xogta Shakhsiyeed. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad ka codsato Shirkadda inaysan ka iibin Xogtaada Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad. Waxaad ku soo gudbin kartaa codsi noocaas ah adoo booqanaya qeybtayada “Ha iibiin Macluumaadkeyga Gaarka ah” ama bogga internetka.
Xaq u leeyahay inuu wax ka ogaado Xogtaada Shakhsiyeed. Waxaad xaq u leedahay inaad codsato oo aad ka hesho macluumaadka shirkadda ee la xiriira shaacinta waxyaabaha soo socda:
Qeybaha Xogta Shakhsiyeed ee la ururiyey
Ilaha laga soo ururiyay Xogta Shakhsiyeed
Ujeedada ganacsi ama ganacsi ee uruurinta ama iibinta Xogta Shakhsiyeed
Qeybaha dhinacyada saddexaad ee aan la wadaagno Xogta Shakhsiyeed
Qeybaha gaarka ah ee Xogta Shakhsiyeed ee aan kaa aruurinay adiga
Xaq u leeyahay inuu tirtiro Xogta Shakhsiyeed. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato tirtirka Xogtaada Shakhsiyeed ee la aruuriyay 12-kii bilood ee lasoo dhaafay.
Xaqa in aan la takoorin. Waxaad xaq u leedahay inaan lagugu takoorin inaad isticmaasho mid ka mid ah xuquuqda Macaamilkaaga, oo ay ku jiraan:
Adiga oo kuu diidaya alaabada ama adeegyada
Lacag-siinta qiime kala duwan ama sicirka badeecadaha ama adeegyada, oo ay kujirto adeegsiga qiimo-dhimis ama dheefaha kale ama ciqaab la saarayo
Adiga oo ku siinaya heer ama tayada alaabooyinka ama adeegyada ka duwan
Soo jeedinta inaad heli doontid qiimo ka duwan ama sicirka alaabada ama adeegyada ama heer ka duwan ama tayada alaabta ama adeegyada.
Ku jimicsiga Xuquuqdaada Ilaalinta Macluumaadka CCPA
Si aad ugu adeegsatid wax kasta oo xuquuqdaada ka mid ah oo hoos imanaya CCPA, iyo haddii aad tahay deggane Kaalifoorniya, Waxaad noo soo diri kartaa emayl ama waad na soo wici kartaa ama waad booqan kartaa qaybtayada “Ha iibiin Macluumaadkeyga Gaarka ah” ama bogga internetka.
Shirkaddu waxay shaaca ka qaadi doontaa oo ku bixin doontaa macluumaadka loo baahan yahay si bilaash ah muddo 45 maalmood gudahood ah laga soo bilaabo markay heshay codsigaaga la xaqiijin karo. Waqtiga lagu bixinayo macluumaadka loo baahan yahay waxaa lagu kordhin karaa hal mar oo ah 45 maalmood oo dheeri ah marka macquul ah loo baahdo iyo ogeysiis hore.
Ha Iibin Macluumaadkeyga Gaarka ah
Ma iibinno macluumaadka shakhsiyeed. Si kastaba ha noqotee, Bixiyeyaasha Adeegga ee aan la kaashanno (tusaale ahaan, shuraakadayada xayeysiinta) waxay u isticmaali karaan tikniyoolajiyadda Adeegga “iibiya” macluumaadka shaqsiyeed sida uu qeexay sharciga CCPA.
Haddii aad rabto inaad ka baxdo adeegsiga macluumaadkaaga shaqsiyeed ujeeddooyin xayeysiis dulsaar ku saleysan iyo iibkaan suurtagalka ah sida lagu qeexay sharciga CCPA, waad sameyn kartaa adoo raacaya tilmaamaha hoose.
Fadlan la soco in ka bixitaan kasta ay gaar u tahay biraawsarka aad isticmaasho. Waxaad u baahan kartaa inaad ka baxdo biraawsar kasta oo aad isticmaasho.
Waad ka bixi kartaa helitaanka xayeysiisyada shaqsi ahaaneed ee ay u adeegaan Adeeg bixiyayaasheena adoo raacaya tilmaamahayaga lagu soo bandhigay Adeegga:
Ka socda “Oggolaanshaha Kukiyada” ogeysiiska banner
Ama bannerkeena ogeysiiska ah ee “CCPA Opt-out”
Ama ka Calankeena ogeysiiska “Ha Iibin Macluumaadkeyga Shakhsiyeed”
Ama ka socota xiriirkeena “Ha Iibin Macluumaadkeyga Gaarka ah”
Ka bixitaanku wuxuu ku dhejin doonaa cookie kombiyuutarkaaga kaas oo u gaar ah biraawsarka aad isticmaasho si aad uga baxdo. Haddii aad bedesho daalacayaasha ama aad tirtirto cookies-ka uu kaydiya biraawsarkaagu, waxaad u baahan doontaa inaad mar kale ka baxdo.
Qalabkaaga mobilada ayaa ku siin kara awood aad ku joojiso isticmaalka macluumaadka ku saabsan barnaamijyada aad isticmaasho si ay kuugu adeegto xayeysiisyo ku wajahan danahaaga:
“Ka-bax Xayeysiisyada Xiisaha Leh” ama “Ka-bax Shakhsiyadeed Xayeysiiska” ee aaladaha Android
“Xaddid Raadinta Xayeysiiska” qalabka macruufka ah
Waxaad sidoo kale joojin kartaa aruurinta macluumaadka goobta Mobiilkaaga adoo badalaya dookhyada kujira mobilkaaga.
Nidaamka “Ha Raadsan” Nidaamka looga Baahan Yahay Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Qarsoodiga ah ee California (CalOPPA)
Adeegayagu kama jawaabo calaamadaha ha raacin.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah boggaga internetka ee dhinac saddexaad waxay la socdaan dhaqdhaqaaqyadaada daalacashada. Haddii aad booqanaysid degellada noocan oo kale ah, Waxyaabaha aad doorbidayso ayaad ka dhigan kartaa biraawsarkaaga shabakadda si aad ugu wargeliso degellada in aadan rabin in lagaa daba tago Waad awood u yeelan kartaa ama joojin kartaa DNT adoo booqanaya dookhyada ama bogga dejimaha ee shabakadda biraawsarkaaga.
Adeeggu wuxuu ka koobnaan karaa waxyaabaha ku habboon carruurta ka yar 13 sano. Waalid ahaan, waa inaad ogaataa in Adeegga carruurta ka yar 13 sano ay kaqeyb qaadan karaan howlaha ku lug leh ururinta ama adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed. Waxaan u adeegsanaa dadaal macquul ah si loo hubiyo ka hor inta aan laga soo qaadin wax macluumaad shakhsiyeed cunugga, waalidka canugga inuu helo ogeysiis iyo ogolaanshaha ku dhaqanka macluumaadka shaqsiyadeed.
Waxaan sidoo kale xaddidi karnaa sida aan u ururino, u isticmaalno, una kaydinno qaar ka mid ah macluumaadka Isticmaalayaasha u dhexeeya 13 iyo 18 sano jir. Xaaladaha qaarkood, tani waxay ka dhigan tahay Ma awoodi doonno inaan u siino adeeg gaar ah Adeegga Isticmaalayaashaas. Haddii aan u baahanahay inaan ku tiirsanaano ogolaanshaha oo aasaas sharci u ah ka shaqeynta macluumaadkaaga iyo dalkaaga wuxuu u baahan yahay ogolaansho waalid, Waxaan u baahan karnaa ogolaanshaha waalidkaaga ka hor intaanan aruurin oo aan isticmaalin macluumaadkaas.
Waxaan weydiisan karnaa Isticmaalaha inuu xaqiijiyo taariikhda dhalashadiisa ka hor inta aanan ka qaadin wax macluumaad shakhsi ah iyaga. Haddii Isticmaaluhu ka yar yahay da’da 13, Adeegga waa la xirayaa ama waxaa loo wareejinayaa nidaamka oggolaanshaha waalidka.
Macluumaadka laga soo aruuriyay Carruurta da’doodu ka yar tahay 13
Shirkadda ayaa laga yaabaa inay soo uruuriso oo ay keydiso aqoonsi joogto ah sida cookies ama cinwaanada IP ee Carruurta iyadoon waalidku raalli ka ahayn ujeeddada lagu taageerayo howlaha gudaha ee Adeegga.
Waxaan aruurin karnaa oo keydin karnaa macluumaadka kale ee shaqsiyadeed ee ku saabsan carruurta haddii macluumaadkaan uu soo gudbiyo cunug waalidkiis oggolaansho hore ka haysto ama waalidka ama ilaaliyaha cunugga.
Shirkadda ayaa laga yaabaa inay soo uruuriso oo ay kaydiso noocyada soo socda ee macluumaadka shakhsiga ah ee ku saabsan cunugga markii ay soo gudbiyaan canug ogolaansho waalidnimo hore leh ama waalidka ama ilaaliyaha cunugga:
Magaca hore iyo / ama magaca dambe
Magaca waalidka ama ilaaliyaha
Cinwaanka emaylka ee waalidka ama ilaaliyaha
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan macluumaadka aan aruurin karno, Waxaad tixraaci kartaa “Noocyada Xogta La Uruuriyay” ee Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waxaan raacnaa siyaasadeena gaarka ah ee Asturnaanta ee shaacinta macluumaadka shaqsiyeed ee laga soo ururiyey carruurta.
Waalidka horey u siiyay rukhsadda Shirkadda inay soo aruuriso oo ay adeegsato macluumaadkiisa shakhsi ahaaneed ee ilmihiisa way awoodi kartaa, waqti kasta.
Dib u eeg, sax ama tirtir macluumaadka shakhsiga ah ee ilmaha
Jooji uruurinta dheeriga ah ama adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ee canugga
Si aad u sameyso codsi noocan oo kale ah, Waxaad noo soo qori kartaa Adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka ee lagu bixiyay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Xuquuqdaada Asturnaanta Kaalifoorniya (Sharciga California ee Shine the Light)
Marka loo eego Qaybta Sharciga Madaniga ah ee California Qeybta 1798 (Kalifoorniya ee Shine the Light law), dadka deggan California oo leh xiriir ganacsi oo aasaasan annaga ayaa codsan kara macluumaadka hal mar sanadkiiba oo ku saabsan la wadaagga Macluumaadkooda Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad ee ujeeddooyinka suuq-geynta tooska ah ee dhinacyada saddexaad.
Haddii aad jeceshahay inaad codsato macluumaad dheeraad ah hoosta sharciga California Shine the Light, Waad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka ee hoos ku qoran.
Xuquuqda Asturnaanta Kaliforniya ee Isticmaalayaasha Yaryar (Qaybta Xeerka Ganacsiga iyo Xirfadaha Kalifoorniya 22581)
Xeerka Ganacsiga iyo Xirfadaha Kalifoorniya qaybta 22581 ayaa u oggolaanaysa dadka deggan California ee da’doodu ka yar tahay 18 jir ee ka diiwaangashan isticmaalayaasha bogagga, adeegyada ama codsiyada inay codsadaan oo ay helaan ka-qaadista waxyaabaha ama macluumaadka ay si cad u dhejiyeen.
Si aad u codsato ka saarista xogtaas, iyo haddii aad tahay deggane Kaalifoorniya, Waad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka ee hoos ku xusan, kuna dar cinwaanka emaylka la xiriira koontadaada.
La soco in Codsigaagu aanu dammaanad ka qaadayn dhammaystir ama dhammaystiran oo ah ka kooban ama macluumaad lagu dhejiyay internetka iyo in sharcigu aanu oggolaan doonin ama u baahnayn in laga saaro duruufaha qaarkood.
Xiriirinta Shabakadaha kale
Adeegyadeena waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal degello kale oo aan annagu ka hawlgelin. Hadaad gujiso xiriir dhinac saddexaad ah, Waxaa lagugu jiheyn doonaa goobta qeybta saddexaad. Waxaan si adag kugula talineynaa inaad dib u eegto Nidaamka Asturnaanta ee degel kasta oo aad booqato.
Ma xakamayn karno mana qaadanayno wax masuuliyad ah waxyaabaha ku jira, siyaasadaha asturnaanta ama dhaqamada bogagga ama adeegyada dhinac saddexaad.
Isbedelada Siyaasaddan Khaaska ah
Waxaan cusbooneysiin karnaa Nidaamkeena Khaaska ah waqti ka waqti. Waxaan kugula socodsiin doonaa wixii isbeddel ah adoo soo dhejinaya Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee cusub boggan.
Waxaan kugula socodsiin doonnaa iimayl iyo / ama ogeysiis caan ah oo ku saabsan Adeeggeena, kahor intaan isbeddelku waxtar yeelan oo aan cusbooneysiinno taariikhda “Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay” ee ku xusan xagga sare ee Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad dib u eegis ku sameyso Siyaasaddan Asturnaanta xilliyada qaar wixii isbeddel ah. Isbedelada lagu sameynayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa wax ku ool ah marka lagu dhajiyo boggan.
Haddii aad wax su’aalo ah ka qabtid Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, Waad nala soo xiriiri kartaa:
Iimayl ahaan: contact@risepartnership.com